Umanyolo wokusabalalisa abahlinzeki nefektri - China Umanyolo wokusabalalisa abakhiqizi
Umniningwane womkhiqizo wokusabalalisa umanyolo we-Centrifugal disc uhlukaniswe kakhulu waba yidiski eyodwa nohlobo lwama-disc amabili. Isisabalalisi sediski yediski sakhiwa i-rack, idivaysi yokumiswa, ibhokisi lomanyolo wohlobo lwebhakede, idivaysi yokulungisa ukukhishwa kukamanyolo, ipuleti likamanyolo lokusabalalisa kanye nedivayisi yokushayela esabalalisa umanyolo, njengoba kukhonjisiwe kuMdwebo 1. Ibhokisi likamanyolo lifakwe engxenyeni engenhla yomshini Uhlaka, nendawo esetshenziselwa umanyolo isethwe ezansi kwebhokisi likamanyolo, kanye ne-fer ...
Imininingwane Yomkhiqizo Isisabalalisi sikamanyolo esingenawo amandla iyithuluzi lokusabalalisa umanyolo eliqhutshwa phansi, elingadonswa ngogandaganda wasengadini onamandla angaphezu kwe-15 amahhashi noma ugandaganda we-18 + HP. Ikakhulu ukufafaza umanyolo endaweni encane. Isisabalalisi esincane somquba singasabalalisa umanyolo wamakhemikhali, usawoti, amatshe amancane, ukuvuka, ukhula, nomquba ophilayo, njalonjalo. Ikhono Lokucaciswa Kobuchwepheshe 16in³ / 0.453m³ Amandla 28in³ / 0.793m³ Ubukhulu obukhulu 114 * 46.5 * 30.5in / 2895 * 1181 * 775m ...
Umniningwane womkhiqizo wokusabalalisa umanyolo we-DFC usetshenziselwa ukusabalalisa umanyolo ongaphambi kokulima, ukuhlwanyela ngemuva kokulima kanye notshani. Ukusebenza kokusabalalisa umanyolo wembewu kwenziwa. Umshini unezici zesakhiwo esihlangene, ukusetshenziswa okuhlukahlukene, ukusebenza kahle kakhulu nokuhlwanyela, okulungele ukusetshenziswa kwamapulazi amakhulu, amadlelo kanye namadlelo. Inkampani yethu iqala futhi idizayine lolu hlobo lwesisabalalisi somquba ukuhlangabezana nokufunwa okubanzi kwabasebenzisi ...